အသိ ရှိစေချင် နားလည်ပါစေချင် ဒီရက်ပိုင်း အစ္စလာမ်သူငယ်ချင်းတွေ ခံပြင်းနေကြတဲ့ မန်းလေး မှာ စုပေါင်း ဝတ်ပြု လို့ထောင် (၃) လ ချတဲ့ကိစ္စ -အသိရှိစေချင် နားလည်ပါစေချင် – Let Pan Daily
အသိ ရှိစေချင် နားလည်ပါစေချင် ဒီရက်ပိုင်း အစ္စလာမ်သူငယ်ချင်းတွေ ခံပြင်းနေကြတဲ့ မန်းလေး မှာ စုပေါင်း ဝတ်ပြု လို့ထောင် (၃) လ ချတဲ့ကိစ္စ -အသိရှိစေချင် နားလည်ပါစေချင်
ဒီရက်ပိုင်း အစ္စလာမ်သူငယ်ချင်းတွေ ခံပြင်းနေကြတာတွေ့မိတယ်. ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာ မန်းလေးမှာ စုပေါင်းဝတ်ပြုလို့..သူတို့ဘာသာဝင်တွေကို ထောင် -၃လချတဲ့အချိန် မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ..တွေရဲ့ အန္တိမဈာပန က လူစုတဲ့သူတွေကို ငွေဒဏ်ပဲချလို့..
ဘက်လိုက်တယ်..သူတို့ ဘာသာမို့နှိမ်တယ်စသဖြင့်ရေးသားကြသလိုအမေ့ကိုလဲ မဲမထည့်တော့ဘူးစသဖြင့်မန့်နေကြတာလဲတွေ့မိပါတယ်..ကိုယ်တိုင်လဲ သူတို့နေရာက ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ သူတို့ မတရားဘူးခံစားရတာ ဖြစ်သင့်ပါတယ်.ဆိုပြီး
တွေးမိတယ်..အမေ့ကိုမဲထည့်တာ မထည့်တာကသူတို့ကဏ္ဍ.သူတို့ လွတ်လပ်ခွင့် မို့ စိတ်မဝင်စားပါဘူး.
အချိန်ထိ အမေ့ကို မဲထည့်ပါစေဆိုတဲ့စေတနာ.
ဒီအဖြစ်တွေကိုဖာထေးပြီးရေးမယ်ဟဲ့ ဆိုတဲ့စေတနာ မပါပါဘူး.ဘာ့ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲ?ဘယ်ဟာအမှန်တရားလဲ?သိချင်စိတ်နဲ့ပဲစုံစမ်းရေးသားပါတယ်..အဲ့အတွက် သတ်ခံရတဲ့ဦးဦးကိုနီရဲ့ဆရာ..ဥပဒေပညာရှင်ကို ဒီအကြောင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့သေချာမေးပြီးမှData နဲ့ ကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်ပြီးရေးသားပါတယ်..ဘာသာ မတူပဲရေးသားရလို့ စေတနာနဲ့ Dataနဲ့ ဂရုစိုက်ပြီးရေးရတာပါ..😋
➡️နံပါတ်1.. ကိုဗစ်အမှုမှ မဟုတ်ပါဘူး.ဘယ်အမှု မဆိုတရားရုံး တစ်ခုထဲ တရားသူကြီးတစ်ယောက်ထဲက မတူညီတဲ့အမိန့်ချမှတ်ပြီဆိုရင် တော့မတရားမှုလို့ပြောလို့ရပါတယ်.. သို့သော် တရားရုံးမတူဘူး မြို့မတူဘူးဆိုရင် တော့သက်ဆိုင်ရာတရားသူကြီးရဲ့ဆင်ခြင်တုံတရား အရ ဆုံးဖြတ်တာသာဖြစ်ပါတယ်..
➡️နံပါတ်2-တရားသူကြီးတွေဟာနိုင်ငံရေး အရ ရာထူး ယူထားတဲ့ သူတွေမဟုတ်သလို. အမေစုနဲ့ NLD က ခန့်ထားတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေမဟုတ်ဘူးပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအမှုထမ်းတွေသာဖြစ်ပါတယ်.
➡️နံပါတ်3.ဦးသန်းရွှေ နဲ့ ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ထဲက ခန့်ထား တဲ့​အမူထမ်းတွေ သာဖြစ်တဲ့အတွက်.အစိုးရသစ်တွေ တက်တဲ့ထိလဲ သူတို့ ပင်စင်မယူရင် ဒီရာထူးအတိုင်းဆက်လက်တည်ရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်.သို့သော်ရာထူးအတက်အကျတော့ရှိတတ်ပါတယ်..
➡️နံပါတ်4-တရားသူကြီးတွေ ဆိုတာ တရားစီရင်ရေးဆိုတဲ့ ဒေါက်တိုင်တစ်ခုရဲ့ အောက် ကဖြစ်တယ်.. အစိုးရဆိုတာကတော့ အုပ်ချုပ်ရေး ဆိုတဲ့ဒေါက်တိုင်တစ်ခုရဲ့အောက်ကပါ..
➡️နံပါတ်5-အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ တရား စီရင်ရေးဟာ ဒေါက်တိုင်ခြင်း ကဏ္ဍခြင်းမတူပါဘူး..တရားသူကြီးတွေရဲ့ စီရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ကမ္ဘာပေါ်ရှိဘယ် အစိုးရကမှ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခွင့်မရှိပါဘူး..
➡️နံပါတ်-6.တရားသူကြီးတွေ စီရင်ဖို့ ပြဋ္ဌာန်း ထားတဲ့ ဥပဒေတွေကတော့ပြည်သူ့လွှတ်တော် လို့ အသိများတဲ့ ဥပဒေပြုစုရေး ဒေါက်တိုင်ရဲ့ တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်..
➡️နံပါတ်-7. ဥပဒေ ပြုစုရေးဒေါက်တိုင်ကဏ္ဍ..တရားစီရင်ရေးဒေါက်တိုင်.ကဏ္ဍ အုပ်ချုပ်ရေး ဒေါက်တိုင်ကဏ္ဍတွေဟာတူညီမှုမရှိပဲ.. သီးခြားဆီ ရှိတယ် ဆိုတာ မြန်မာပြည်ကမည်သည့်ဘာသာကိုးကွယ်သူဖြစ်ပစေမည်သည့်လူမျိုးဖြစ်ပစေ. အားလုံးသတိပြုရပါမယ်.သိရှိနေရ ပါမယ်
ဒီဒေါက်တိုင် -၃ခု ရှိနေတာကို သတိမမူကြပဲ ရဲ မဟုတ်တာလုပ်လဲ
အစိုးရ..တရားသူကြီး မဟုတ်တာလုပ်လဲ အစိုးရပဲဆိုရင်.. ပါသမျှမစင်တိုင်းချီးတိုင်းကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုမရှိပဲအစိုးရခေါင်းပေါ်ကြီး ပုံချနေတာနဲ့တူပါတယ်..
ရဲ မဟုတ်တာလုပ်ပြီဆိုရင်.ပြည်ထဲရေးအောက် မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီ့ရဲဟာ ဘယ်ဒေါက်တိုင်အောက် မှာလဲတွေးရပါမယ်..အဲ့လိုပဲတရားသူကြီးဆိုလဲ ဘယ်ဒေါက်တိုင်အောက် မှာလဲ တွေးရပါမယ်..ဒေါက်တိုင်-၃တိုင်ထဲကတရားစီရင်ရေးဒေါက်တိုင်အောက် မှာလား?အုပ်ချုပ်ရေးဒေါက်တိုင်အောက် မှာလား?
ဥပဒေပြု စုရေးဒေါက်တိုင်အောက် မှာလား? တွေးပါ..သူ့ကဏ္ဍနဲ့သူ ခွဲခြားပြီးလုပ်ဆောင်ရတဲ့တိုင်းပြည်မှာ.ပြည်ထဲရေး.. နယ်စပ်နဲ့ တရားစီရင်ရေး..ကာကွယ်ရေးတွေကရောဘယ်အောက် မှာလဲ ?
ဗြုန်းဆို မမျှတဘူး ဘက် လိုက်တယ် ထင်နေတဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေ အတွက်သတင်းစာထဲမှာမနေ့ကသတင်းကောင်းတက်လာပါတယ်..ဒါကတော့ မွန်ပြည်နယ်ကျိုက် မရောမြို့နယ်..ကြာအင်းချောင်းကျေးရွာက ဦးဇော်မင်းကို ဘုရားထီးတော်တင်ရာမှာ လူစုလူဝေးပြုလုပ်တဲ့ အတွက် ထောင်(၉)လချ လိုက်တဲ့
သတင်းပါပဲ.ဒီကိုဗစ်အမှုမှာတော့ မန်းလေးကဝတ်ပြုသူတွေထက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဦးဇော်မင်းက ထောင်(၆)လ ပိုများသွားပါပြီ..(ပထမဆုံးပြောခဲ့တဲ့နံပါတ်-1.တရားရုံးမတူဘူး..တရားသူကြီးမတူဘူး.တရားစီရင်ရေးမတူပါဘူး..)
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်သူငယ်ချင်းတွေအနေနဲ့လဲ အန္တိမဈာပန တော့
ငွေဒဏ်..ဟာ ငါတို့ကျတော့ ထောင်
(၃)လ ဆိုပြီး ဝိုင်းရေးနေကြရင် ခု
မွန်ပြည်နယ် ကျိုက် မရောက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကို လဲ ထောင်(၉)လ ချလိုက် တာကိုလဲ တရားမျှတစွာ
ပြန်ရေးကြမယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ်..အဲ့လိုဆို ကိုယ့် ဘာသာဝင်
တွေကိုမှ နှိမ်တယ်ဆိုတဲ့ မကောင်းတဲ့ ခံစားချက်တွေအစားဒီတရားစီရင်ရေးကတော့မျှတသားဆိုတဲ့ စိတ်ခံစားမှုမျိုးဖြစ်လာမှာပါ..
ဟာ..ဒါကိုမှ ငါတို့ အစ္စလာမ်တွေ ကို ချတဲ့ ထောင်ဒဏ်ကို မကျေနပ်ဘူး
ဟို အန္တိမဈာပနက ငွေဒဏ်ကိုမကျေနပ်ဘူး ဆိုရင်..အဲ့ဒီ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို မမှန်ကန်ဘူး မကျေနပ်ဘူးဆိုရင် သူ့ထက် အဆင့်မြင့်တဲ့ တရားရုံး အဆင့်ဆင့်ကို အယူခံဝင်နိုင်ပါတယ်..ပြင်ဆင်မှု လျှောက်ထားနိုင်တယ်.. Appeal နဲ့ Revision လုပ်နိုင်တာပေါ့..
တယ်.ကိုယ့်နိုင်ငံထဲ က.. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လဲ မကူးစေချ င်ပါဘူး
ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်လဲ မကူးစေချင်ပါဘူး..အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်လဲမကူးစေချင်ပါဘူး..ဟိန္ဒူ ဘာသာဝင်တွေ လဲ မကူးစေချင်ပါဘူး..ရှင်းရှင်းပြောရရင် ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ့်နိုင်ငံထဲက လူတစ်ဦး ချင်းဆီ မပြောနဲ့.. ပုရွက်ဆိပ်တစ်ကောင်တောင် မကူးစေချင်ပါဘူး..အဲ့လိုပဲ ကူးစက်အောင် လုပ်တဲ့ မည်သည့်ဘာသာ မည်သည့်လူမျိုး ကိုမဆို..လဲ တရားစီရင်ရေး ဒေါက်တိုင်အောက်ကမျှတစွာ အပြစ်ပေးစေချင် ပါတယ်…
အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လား? ဒေါက်တိုင်တွေမခွဲခြားသူ့ကို မဲမထည့်ဘူးပြောလဲ..နိုင်ငံကို မချစ်တော့ဘူးပြောလဲ. သူ့ပြည်သူ
တွေ အတွက်..ဘာသာမတူလဲ. လူမျိုးမတူလဲ ရင်ဝယ် သားသမီး
တွေလို သူရရှိတဲ့ ဒေါက်တိုင်အောက်ကနေ..ဒီကပ်ရောဂါဆိုး
ကြီးကနေ အစွမ်းကုန် ကာကွယ်
ဒေါက်တိုင်တွေမတူတာ..သူ့ကိုခုချိန်ထိ သမ္မတ မဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာ တွေ မတွေးပဲ သူ့ကို အပြစ်မြင်
နေကြလဲ.. အမေလား..? သူ့ကိုအပြစ်မြင်တဲ့ ဘယ်သူ့ကို မဆိုသူ့ပြည်သူတွေမို့ ထာဝရချစ်မြဲ..သူစွမ်းသလောက်စောင့်ရှောက်နေမြဲပါပဲ… ❤️
ဒီစာလေးကို ဖတ်ပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် သူငယ်ချင်းတွေ
မဲ ထည့်တာ မထည့်တာအရေးမကြီး သလို.တစ်ဦးချင်းဆီလွတ်လပ်ခွင့်မို့ အေးဆေးပါ..ဒါပေမဲ့တရားရုံးမတူရင် တရားသူကြီးမတူရင်. အော်. ဒီလိုပါလား.ဆိုတာ သိပြီး..ဒေါက်တိုင်တွေ မတူပါလားဆိုတာ သိပြီး..ဟာ.. မွန်ပြည်နယ် ကျိုက် မရောမှာငါတို့ဘာသာထက်တောင် သူတို့ ဘာသာကို ထောင်ပိုချပါလားဆိုတာသိပြီး..ခံပြင်းမှုလေးတွေ ပြေလျော့သွားရင်ကျေနပ်ပြီ..စာအရှည်ကြီးရေးရကျိုးနပ်ပါပြီ..
ဘာလို့ဆို အားလုံး ရဲ့ဘုံရန်သူက?..🦠..
လေးစားစွာဖြင့် ခရစ်ဒက် ……..Chit Manaw(KHL)
ဒီရကျပိုငျး အစ်စလာမျသူငယျခငျြးတှေ ခံပွငျးနကွေတာတှမေိ့တယျ. ကိုဗဈဖွဈတဲ့ အခြိနျမှာ မနျးလေးမှာ စုပေါငျးဝတျပွုလို့..သူတို့ဘာသာဝငျတှကေို ထောငျ -၃လခတြဲ့အခြိနျ မှာ ဗုဒ်ဓဘာသာ..တှရေဲ့ အန်တိမဈာပန က လူစုတဲ့သူတှကေို ငှဒေဏျပဲခလြို့..
ဘကျလိုကျတယျ..သူတို့ ဘာသာမို့နှိမျတယျစသဖွငျ့ရေးသားကွသလိုအမကေို့လဲ မဲမထညျ့တော့ဘူးစသဖွငျ့မနျ့နကွေတာလဲတှမေိ့ပါတယျ..ကိုယျတိုငျလဲ သူတို့နရောက ကိုယျခငျြးစာစိတျနဲ့ သူတို့ မတရားဘူးခံစားရတာ ဖွဈသငျ့ပါတယျ.ဆိုပွီး
တှေးမိတယျ..အမကေို့မဲထညျ့တာ မထညျ့တာကသူတို့ကဏ်ဍ.သူတို့ လှတျလပျခှငျ့ မို့ စိတျမဝငျစားပါဘူး.
အခြိနျထိ အမကေို့ မဲထညျ့ပါစဆေိုတဲ့စတေနာ.
ဒီအဖွဈတှကေိုဖာထေးပွီးရေးမယျဟဲ့ ဆိုတဲ့စတေနာ မပါပါဘူး.ဘာ့ကွောငျ့ဒီလိုဖွဈတာလဲ?ဘယျဟာအမှနျတရားလဲ?သိခငျြစိတျနဲ့ပဲစုံစမျးရေးသားပါတယျ..အဲ့အတှကျ သတျခံရတဲ့ဦးဦးကိုနီရဲ့ဆရာ..ဥပဒပေညာရှငျကို ဒီအကွောငျးတှနေဲ့ ပတျသကျလို့သခြောမေးပွီးမှData နဲ့ ကွောငျးကြိုးဆငျခွငျပွီးရေးသားပါတယျ..ဘာသာ မတူပဲရေးသားရလို့ စတေနာနဲ့ Dataနဲ့ ဂရုစိုကျပွီးရေးရတာပါ..😋
➡️နံပါတျ1.. ကိုဗဈအမှုမှ မဟုတျပါဘူး.ဘယျအမှု မဆိုတရားရုံး တဈခုထဲ တရားသူကွီးတဈယောကျထဲက မတူညီတဲ့အမိနျ့ခမြှတျပွီဆိုရငျ တော့မတရားမှုလို့ပွောလို့ရပါတယျ.. သို့သျော တရားရုံးမတူဘူး မွို့မတူဘူးဆိုရငျ တော့သကျဆိုငျရာတရားသူကွီးရဲ့ဆငျခွငျတုံတရား အရ ဆုံးဖွတျတာသာဖွဈပါတယျ..
➡️နံပါတျ2-တရားသူကွီးတှဟောနိုငျငံရေး အရ ရာထူး ယူထားတဲ့ သူတှမေဟုတျသလို. အမစေုနဲ့ NLD က ခနျ့ထားတဲ့ ဝနျထမျးတှမေဟုတျဘူးပွညျသူ့ဝနျထမျးအမှုထမျးတှသောဖွဈပါတယျ.
➡️နံပါတျ3.ဦးသနျးရှေ နဲ့ ဦးသိနျးစိနျလကျထကျထဲက ခနျ့ထား တဲ့အမူထမျးတှေ သာဖွဈတဲ့အတှကျ.အစိုးရသဈတှေ တကျတဲ့ထိလဲ သူတို့ ပငျစငျမယူရငျ ဒီရာထူးအတိုငျးဆကျလကျတညျရှိနမှော ဖွဈပါတယျ.သို့သျောရာထူးအတကျအကတြော့ရှိတတျပါတယျ..
➡️နံပါတျ4-တရားသူကွီးတှေ ဆိုတာ တရားစီရငျရေးဆိုတဲ့ ဒေါကျတိုငျတဈခုရဲ့ အောကျ ကဖွဈတယျ.. အစိုးရဆိုတာကတော့ အုပျခြုပျရေး ဆိုတဲ့ဒေါကျတိုငျတဈခုရဲ့အောကျကပါ..
➡️နံပါတျ5-အုပျခြုပျရေးနဲ့ တရား စီရငျရေးဟာ ဒေါကျတိုငျခွငျး ကဏ်ဍခွငျးမတူပါဘူး..တရားသူကွီးတှရေဲ့ စီရငျဆုံးဖွတျခကျြတှကေို ကမ်ဘာပျေါရှိဘယျ အစိုးရကမှ ဝငျရောကျစှကျဖကျခှငျ့မရှိပါဘူး..
➡️နံပါတျ-6.တရားသူကွီးတှေ စီရငျဖို့ ပွဋ်ဌာနျး ထားတဲ့ ဥပဒတှေကေတော့ပွညျသူ့လှတျတျော လို့ အသိမြားတဲ့ ဥပဒပွေုစုရေး ဒေါကျတိုငျရဲ့ တာဝနျဖွဈပါတယျ..
➡️နံပါတျ-7. ဥပဒေ ပွုစုရေးဒေါကျတိုငျကဏ်ဍ..တရားစီရငျရေးဒေါကျတိုငျ.ကဏ်ဍ အုပျခြုပျရေး ဒေါကျတိုငျကဏ်ဍတှဟောတူညီမှုမရှိပဲ.. သီးခွားဆီ ရှိတယျ ဆိုတာ မွနျမာပွညျကမညျသညျ့ဘာသာကိုးကှယျသူဖွဈပစမေညျသညျ့လူမြိုးဖွဈပစေ. အားလုံးသတိပွုရပါမယျ.သိရှိနရေ ပါမယျ
ဒီဒေါကျတိုငျ -၃ခု ရှိနတောကို သတိမမူကွပဲ ရဲ မဟုတျတာလုပျလဲ
အစိုးရ..တရားသူကွီး မဟုတျတာလုပျလဲ အစိုးရပဲဆိုရငျ.. ပါသမြှမစငျတိုငျးခြီးတိုငျးကိုကြိုးကွောငျးဆီလြျောမှုမရှိပဲအစိုးရခေါငျးပျေါကွီး ပုံခနြတောနဲ့တူပါတယျ..
ရဲ မဟုတျတာလုပျပွီဆိုရငျ.ပွညျထဲရေးအောကျ မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီ့ရဲဟာ ဘယျဒေါကျတိုငျအောကျ မှာလဲတှေးရပါမယျ..အဲ့လိုပဲတရားသူကွီးဆိုလဲ ဘယျဒေါကျတိုငျအောကျ မှာလဲ တှေးရပါမယျ..ဒေါကျတိုငျ-၃တိုငျထဲကတရားစီရငျရေးဒေါကျတိုငျအောကျ မှာလား?အုပျခြုပျရေးဒေါကျတိုငျအောကျ မှာလား?
ဥပဒပွေု စုရေးဒေါကျတိုငျအောကျ မှာလား? တှေးပါ..သူ့ကဏ်ဍနဲ့သူ ခှဲခွားပွီးလုပျဆောငျရတဲ့တိုငျးပွညျမှာ.ပွညျထဲရေး.. နယျစပျနဲ့ တရားစီရငျရေး..ကာကှယျရေးတှကေရောဘယျအောကျ မှာလဲ ?
ဗွုနျးဆို မမြှတဘူး ဘကျ လိုကျတယျ ထငျနတေဲ့ အစ်စလာမျ ဘာသာဝငျတှေ အတှကျသတငျးစာထဲမှာမနကေ့သတငျးကောငျးတကျလာပါတယျ..ဒါကတော့ မှနျပွညျနယျကြိုကျ မရောမွို့နယျ..ကွာအငျးခြောငျးကြေးရှာက ဦးဇျောမငျးကို ဘုရားထီးတျောတငျရာမှာ လူစုလူဝေးပွုလုပျတဲ့ အတှကျ ထောငျ(၉)လခြ လိုကျတဲ့
သတငျးပါပဲ.ဒီကိုဗဈအမှုမှာတော့ မနျးလေးကဝတျပွုသူတှထေကျဗုဒ်ဓဘာသာဝငျဦးဇျောမငျးက ထောငျ(၆)လ ပိုမြားသှားပါပွီ..(ပထမဆုံးပွောခဲ့တဲ့နံပါတျ-1.တရားရုံးမတူဘူး..တရားသူကွီးမတူဘူး.တရားစီရငျရေးမတူပါဘူး..)
အစ်စလာမျဘာသာဝငျသူငယျခငျြးတှအေနနေဲ့လဲ အန်တိမဈာပန တော့
ငှဒေဏျ..ဟာ ငါတို့ကတြော့ ထောငျ
(၃)လ ဆိုပွီး ဝိုငျးရေးနကွေရငျ ခု
မှနျပွညျနယျ ကြိုကျ မရောက ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျကို လဲ ထောငျ(၉)လ ခလြိုကျ တာကိုလဲ တရားမြှတစှာ
ပွနျရေးကွမယျလို့ မြှျောလငျ့ ပါတယျ..အဲ့လိုဆို ကိုယျ့ ဘာသာဝငျ
တှကေိုမှ နှိမျတယျဆိုတဲ့ မကောငျးတဲ့ ခံစားခကျြတှအေစားဒီတရားစီရငျရေးကတော့မြှတသားဆိုတဲ့ စိတျခံစားမှုမြိုးဖွဈလာမှာပါ..
ဟာ..ဒါကိုမှ ငါတို့ အစ်စလာမျတှေ ကို ခတြဲ့ ထောငျဒဏျကို မကနြေပျဘူး
ဟို အန်တိမဈာပနက ငှဒေဏျကိုမကနြေပျဘူး ဆိုရငျ..အဲ့ဒီ့ဆုံးဖွတျခကျြတှကေို မမှနျကနျဘူး မကနြေပျဘူးဆိုရငျ သူ့ထကျ အဆငျ့မွငျ့တဲ့ တရားရုံး အဆငျ့ဆငျ့ကို အယူခံဝငျနိုငျပါတယျ..ပွငျဆငျမှု လြှောကျထားနိုငျတယျ.. Appeal နဲ့ Revision လုပျနိုငျတာပေါ့..
တယျ.ကိုယျ့နိုငျငံထဲ က.. ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျလဲ မကူးစခြေ ငျပါဘူး
ခရဈယာနျ ဘာသာဝငျလဲ မကူးစခေငျြပါဘူး..အစ်စလာမျ ဘာသာဝငျလဲမကူးစခေငျြပါဘူး..ဟိန်ဒူ ဘာသာဝငျတှေ လဲ မကူးစခေငျြပါဘူး..ရှငျးရှငျးပွောရရငျ ကိုယျ့တိုငျးပွညျ ကိုယျ့နိုငျငံထဲက လူတဈဦး ခငျြးဆီ မပွောနဲ့.. ပုရှကျဆိပျတဈကောငျတောငျ မကူးစခေငျြပါဘူး..အဲ့လိုပဲ ကူးစကျအောငျ လုပျတဲ့ မညျသညျ့ဘာသာ မညျသညျ့လူမြိုး ကိုမဆို..လဲ တရားစီရငျရေး ဒေါကျတိုငျအောကျကမြှတစှာ အပွဈပေးစခေငျြ ပါတယျ…
အမဒေျေါအောငျဆနျးစုကွညျလား? ဒေါကျတိုငျတှမေခှဲခွားသူ့ကို မဲမထညျ့ဘူးပွောလဲ..နိုငျငံကို မခဈြတော့ဘူးပွောလဲ. သူ့ပွညျသူ
တှေ အတှကျ..ဘာသာမတူလဲ. လူမြိုးမတူလဲ ရငျဝယျ သားသမီး
တှလေို သူရရှိတဲ့ ဒေါကျတိုငျအောကျကနေ..ဒီကပျရောဂါဆိုး
ကွီးကနေ အစှမျးကုနျ ကာကှယျ
ဒေါကျတိုငျတှမေတူတာ..သူ့ကိုခုခြိနျထိ သမ်မတ မဖွဈအောငျလုပျထားတာ တှေ မတှေးပဲ သူ့ကို အပွဈမွငျ
နကွေလဲ.. အမလေား..? သူ့ကိုအပွဈမွငျတဲ့ ဘယျသူ့ကို မဆိုသူ့ပွညျသူတှမေို့ ထာဝရခဈြမွဲ..သူစှမျးသလောကျစောငျ့ရှောကျနမွေဲပါပဲ… ❤️
ဒီစာလေးကို ဖတျပွီး အစ်စလာမျဘာသာဝငျ သူငယျခငျြးတှေ
မဲ ထညျ့တာ မထညျ့တာအရေးမကွီး သလို.တဈဦးခငျြးဆီလှတျလပျခှငျ့မို့ အေးဆေးပါ..ဒါပမေဲ့တရားရုံးမတူရငျ တရားသူကွီးမတူရငျ. အျော. ဒီလိုပါလား.ဆိုတာ သိပွီး..ဒေါကျတိုငျတှေ မတူပါလားဆိုတာ သိပွီး..ဟာ.. မှနျပွညျနယျ ကြိုကျ မရောမှာငါတို့ဘာသာထကျတောငျ သူတို့ ဘာသာကို ထောငျပိုခပြါလားဆိုတာသိပွီး..ခံပွငျးမှုလေးတှေ ပွလြေော့သှားရငျကနြေပျပွီ..စာအရှညျကွီးရေးရကြိုးနပျပါပွီ..
ဘာလို့ဆို အားလုံး ရဲ့ဘုံရနျသူက?..🦠..
လေးစားစှာဖွငျ့ ခရဈဒကျ ……..Chit Manaw(KHL)
မကြာမီ ဖွင့်လှစ်တော့ မယ် ရန်ကုန်မြို့ က သီတဂူ စက္ခုဒါန ဆေးရုံ…
မသမာသူ တခြို့၏ သှေးထိုး လှုံ့ဆျောမှု ကွောငျ့ နိုငျငံ့ဝနျထမျး မြား လုပျငနျး ပကျြ ကှကျ နကွေ မှု ကို ရုံးပွနျ တကျကွ ရနျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး ပွော
ရှတေ့နျးက လူနာတှကေို အရေးပျေါ ကယျဆယျပွု စုပေးနကွေတဲ့ လေးစား ဖှယျ မိနျးမခြောလေးမြား
ကျောင်းဖွင့်ချိန် နောက်ကျ ၍ ယခု ပညာသင်နှစ်တွင် သင်ရိုးများ လျှော့မည်